အင်တာဗျူး - Yangon Nation News
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ , November 03, 2020
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် Asian Fame Media ၏ ပေါ်ပြူလာနယူးစ်ဂျာနယ်မှ မေးမြန်းမှုများအား Video Teleconference မှတစ်ဆင့် လက်ခံတွေ့ဆုံဖြေကြား ============= နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ – ၃...
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ , October 27, 2020
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် Nikkei Asia Review အင်တာဗျူးမှ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးနဲ့သက်ဆိုင်သော ဖြေကြားပြောဆိုမူ၊ လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား Nikkei Asia Review မှမေးသည့် အပေါ် ဖြေကြားထားသော အဖြေအား ဖတ်ကြည့်ကြကာ ၊ယခု(၂၀၂၀) ခုနှစ်...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သော COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့်ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ. လူမှုရေးဝန်ကြီး ဦးနိုင်ငံလင်း နှင့် တွေ.ဆုံမေးမြန်းခြင်း
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ , July 18, 2020
ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သောCOVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ အပိုင်း(၂)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သော COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့်ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ. ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း နှင့် တွေ.ဆုံမေးမြန်းခြင်း
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ , July 17, 2020
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သောCOVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ အပိုင်း(၁)
ဒေါင်းတို.မျိုးဆက် သံချပ်အဖွဲ.ဝင် ကိုဖိုးသားနဲ. အင်တာဗျူး
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ , June 26, 2020
ဒီကနေ.(၂၆-၆-၂၀၂၀) ရက်နေ.မနက်မှာ အင်းစိန်ထောင်က ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ ဒေါင်းတို.မျိုးဆက် သံချပ်အဖွဲ.ဝင် ကိုဖိုးသား ကို Yangon Nation ကဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်။
“နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်” ရဲ. Stay Home အတွေ.အကြုံ
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ , May 24, 2020
“Stay Home ကာလ နေလိုက်ရတာဟာ အဆိုးထဲကအကောင်းပါပဲ” လို့ပြောလာတဲ့ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင် “နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်”
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ , May 20, 2020
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ Mask ပြိုင်ပွဲ ပြည်သူအနှစ်သက်ဆုံး ပထမဆုရ Eric Yang ရဲ.ပြောစကား
ေထာင္ထဲမွာေနရတာထက္ Stay at Home ေနရတာက အမ်ားၾကီးသာပါတယ္ ဆိုတဲ့ ဘုန္းလွ်ံ
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ , May 05, 2020
ဦးမျိုးဇော် (ဥက္ကဋ္ဌ) လူသုံးကုန် မြို.နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း လှိုင်သာယာမြို.နယ် နှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်။
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ , April 25, 2020
ချန်းရီဖိနပ်စက်ရုံမှစကားပြန်တစ်ဦးCOVID-19 ရောဂါပိုးတွေ.ရှိမှုကြောင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအမှုဆောင်များ Quarantine ဝင်ရေးကိစ္စ ။
အမေရိကန်ရောက် မြန်မာ တစ်ဦးနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ , April 24, 2020
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် COVID-19 ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားစဉ်ကာလ ကြုံတွေ.ရသော အခြေအနေများကို အမေရိကန်ရောက် မြန်မာ တစ်ဦးအား Yangon Nation မှ ဆက်သွယ်မေးမြန်း တင်ပြထားပါတယ်။